जथाभावी लेख्ने ? गइएला जेल « Jana Aastha News Online
जथाभावी लेख्ने ? गइएला जेल
प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १०:२२
अनलाइन र फेसबुकपेजलगायत सामाजिक सञ्जालमा मनलागी लेख्ने र सेयर गर्ने क्रमले साइबर अपराधलाई बढाएको छ । यससँगै जेल जाने क्रम पनि बढेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने एक मात्र निकाय हो । यही अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासबाट असार २९ गते एक जना फेरि साइबर अपराधमा जेल चलान भएका छन् ।
दुर्गादत्त बाँस्तोलाको फेसबुक पेजबाट समाजमा अराजकता, हिंसा, राजनीतिक उत्तेजना र नकारात्मक भ्रम फैलाउने गरी अश्लील शब्दहरू प्रयोग भएपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल सविता भट्टराईले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४० उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम सजायँ र कसुरमा प्रयोग भएको मोबाइल जफत गरी निजलाई पाँच वर्ष जेल र एक लाख जरिवानाको मागदाबी लिएकी थिइन् ।
सरकारविरोधी लेखहरू पोष्ट गरेको, महामहिम राष्ट्रपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चरित्रमा आँच आउने गरी अश्लील शब्द फेसबुकमा पोष्ट गरेको निजले समेत स्वीकार गरेका थिए ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी बाँस्तोलालाई निर्दोष मान्न नसकिने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल पठाउने गरी सोही संहिताको दफा ७९ बमोजिम आदेश भएको छ । साथै, अभियोगसाथ दाखिल भएको मोबाइललाई जिन्सीमा आम्दानी बाँध्न आदेशसमेत दिइएको छ ।